.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: MX Player Pro for Android
Android ဖုန်းနဲ့ Movie တွေကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံး Player လေးဖြစ်တဲ့ MX Player Pro လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Video ဖော်မက်တွေလည်း တော်တော်လေးကို စုံအောင်ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။ ဒီ Player လေးက တစ်ခြား Player တော်တော်
များများမှာ ဖွင့်လို့မရတဲ့ FLV ဖော်မက်နဲ့ Video တွေကိုပါ ဖွင့်ကြည့်လို့ ရပါတယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး အသံ အတိုး ၊ အကျယ်
Zoom နဲ့ ကြည့်တာ ၊ အလင်းအမှောင် စတာတွေကို ဖုန်း Screen ပေါ်မှာ လိုက်ကလေးနဲ့ ပွတ်ရွှေ့ပြီး လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Video ဖိုင်တွေအရမ်းများနေလို့ ကြည့်ချင်တာကို မြန်မြန်တွေ့အောင် ရှာဖွေဖို့လည်း Search Box လေး ပါ ပါသေးတယ်။
ဒီ Player လေးက Pro Version လေးဖြစ်လို့ ကြော်ငြာ ( Ads ) တွေလည်း မပါပါဘူး။ Google Play မှာဆို ရောင်းတာပါ။
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဖရီး ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ Screenshot လေးတွေလည်း ပြပေးထားပါတယ်ဗျာ..။
Download: MX Player Pro for Android
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ..။ ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် Blog ကို Credit ပြန်ပေးကြပါ..။
Posted by Thurainlin at 09:23
Labels: Android App, Player